Rising Voices sy ny mondialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2018 20:15 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Jolay 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sady tsotra mandiso fanantenana no sarotra tsy misy fiafarany ny baolina fandaka. Mahafa-po ny fanahy izy ary manakorontana ny manampahaizana. Sady manome fahafaham-po izy no maha lasa adala- tsy isalasalana fa izy no mahafinaritra lehibe indrindra noforonin'ny olombelona hatramin'izay”- Tsy mitonona anarana
Milaza ny olona fa ny Amboara Erantany ho an'ny football dia hetsika tena iraisampirenena tokoa. Nanoratra momba izany mba hanehoana ny fitiavan'izy ireo ny bilaogera ao amin'ny tetikasa Rising Voices maro manerana ny kaontinanta .
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy Dago Tiako momba ny fomba hanomezan'ny Amboara Erantany aingam-panahy ny ankizy Malagasy i Ariniaina avy eto Madagasikara :
Ny Asabotsy, raha niandry ny fivorian'ny ICE Club tao an-tokotanin'ny EPP Analakely aho dia nahasarika ahy ny hiakam-pifalian'ireo ankizy. Nilalao baolina ireo zazalahy miisa dimy sy ny zazavavy 1. Hafa kely ny baolin'izy ireo. Izy ireo ihany no namboatra izany. Nahodikodin'izy ireo nanodidina ny harona plastika efa avy nampiasaina sy ny poti-boridamba ny tady, izay no nanaovana izany. Toa manana ny fitsipiny manokana izy ireo saingy namerimberina imbetsaka, raha ny fiheverako azy , ireo teny izay henon'izy ireo tamin'ny onjam-peo na tamin'ny fahitalavitra hoe ‘corner’ sy ‘penalty’. Tena nahafatifaty ry zareo:
Nanoratra ny fomba niatrehan'ny Afrikana ny faharesen'i Ghana nanoloana an'i Orogoay izay namarana ny fanantenana rehetra ho an'ny firenena Afrikana hahazo ny lalao famaranana tamin'ny amboara erantany i Lova Rakotomalala.
Tanàndehibe very fanantenana, nisento ny kaontinanta iray manontolo sady tsy nino.
Nandefa sary mampihetsi-po momba ny lazan'ny amboaran'ny baolina kitra manerantany tao Orogoay i Pablo Flores avy any an-toerana rehefa niangona ny mpankafy hijery ny lalao nifanandrinan'i Ghana sy Orogoay tamin'ny fahitalavitra lehibe:
Faly i Jonathan Alvarez avy ao amin'ny tetikasa Blogging Since Infancy :
Orogoay, anisan'ireo efatra voalohany eto amin'izao tontolo izao!
Naneho hevitra momba ny faharesen'i Brezila teo anatrehan'i Holandy i Hugo Miranda avy any Bolivia :
Izany ny baolina kitra
Nilalao tsara i Brezila nandritra ny 12 minitra voalohany, tanatin'ny fandonam-baolina, ny famitahana, hatrany amin'ny fanafihana. Tsy nekena ny baolina tafiditr'i Robinho izay fampitandremana fa maty tao anatin'ny 10 minitra ny baolina, nahafitaka an'i Felipe Melo tsara i Robinho.
Avy eo dia nanomboka indray ny lalao hafa, fahadisoana maro, nisavoritaka tanteraka, namotsotra i Brezila, marobe ny fitarainana, na dia nisy aza ny fanafihana tsara, saingy tsy nahomby.
Nahita an'i Holandy indray isika tamin'ny fizaram-potoana faharoa : Robben, Van Persie, Sneijder, farany ary nilalao mafy, ny tsy fahombiazan'i Robben, fandresena, hazakazaka ary tafalatsaka tao amin'ny lalao i Brezila.
Holandy 0-1 Brezila
Vakio ny fanangonam-baovao manokana avy amin'ny Global Voices raha tianao ho fantatra ny momba ny fiantraikan'ny Amboara Erantany 2010 nanerana izao tontolo izao.